नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने र प्रवाह गर्ने आधारहरु के के हुन् ? – Banking Khabar
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने र प्रवाह गर्ने आधारहरु के के हुन् ?
बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईवटा मापदण्डको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रवाह गर्ने वा उनीहरुबाट तरलता प्रशोचन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ ।
पोहोर साल अधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई छ महिनासम्म विदेशी ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्ने सुविधा दिएको थियो । यसप्रकारले बैंकहरुले विदेशमा लगानी गरेको रकम ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स रेट चार प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको छ भने विकास ऋणपत्रको व्याजदर साढे छ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बैंकहरुले विदेशमा लगानी गरेको रकम फिर्ता भई नेपालमै लगानी गरियोस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मान्यता रहेको छ ।